Siyanda isibalo sibanenkinga yokubeletha eNingizimu Afrika
Isithobve esigciniwe: IANS ARCH
PHILI MJOLI | February 19, 2020
SIYEHLA isibalo sezingane ezizalwayo kuleli, abesifazane bakuleli abaningi bathola izingane ezimbili kuya kwezintathu okuyisibalo esiphansi uma beqhathaniswa nabanye besifazane emhlabeni abathola izingane ezimbili kuya kwezihlanu.
Umbiko we-United Nations ka-2020 wezinto ezithinta inzalo ukhomba ukuthi njengoba lesi simo sehla, ngo-2030 abantu besifazane emhlabeni abaningi bazobe bethola izingane ezimbili kuya kwezine, ngo-2050 abasifazane abaningi emhlabeni bazobe bethola izingane ezimbili kuphela.
UDkt Frances Paterson owungoti wezifo ezithinta umgudu womchamo esibhedlela eselapha lezi zifo, i-Urology Hospital esePitoli, uthe izinkinga zokuthola abantwana ziyanda kubantu bakuleli futhi zihlasela abesifazane nabesilisa.
Uthe abathandanayo kumele babonane nongoti wezifo ezithinta umchamo i-urogynaecologist uma sekuphele unyaka beya ocansini olungavikelekile kodwa owesifazane engakhulelwa noma uma ekhulelwa kodwa isisu siphuphume.
Inhlangano yezempilo emhlabeni, iWorld Health Organisation (WHO) kwi-website yayo iveza ukuthi inkinga yenzalo yisifo esihlasela umgudu wenzalo esibonakala ngokuthi owesifazane angakhulelwa ebe eya ocansini olungavikelekile nophathina wakhe futhi sekuphele unyaka noma ngaphezulu engakhulelwa.
UDkt Paterson uthe azikho izimpawu ezitheni ezivamise ukuthi zibonakale ngaphandle uma owesifazane eya esikhathini ngokungajwayelekile okungaba ukopha kakhulu noma ukungayi nhlobo esikhathini.
Abanye besifazane izimpawu zokuba nenkinga yenzalo zivela ngokuthi amashubhu ama-fallopian tubes alimale noma avaleke, izinkinga zeqanda elisheshe livuthwe noma eliphuzayo ukuvuthwa, ukushesha banqamuke ukuya esikhathini, ukuhlaselwa umdlavuza wesibeletho kanti eminye imithi yokuwelapha nayo idala ukuthi kube nzima ukuthi umgudu wenzalo ubuye usebenze ngendlela.
Abesilisa nabo bayaba nazo izinkinga zenzalo kuzo okubalwa izinkinga zama-hormones eziholela ekutheni izinwele zikhule ngendlela engajwayelekile noma babe nezinkinga zocansi.
Ezinye izinkinga ezijwayelekile eziholela ekutheni abesilisa babe nenkinga yenzalo kubalwa ukukhuluphala ngokweqile, ukukhula ngokweminyaka, ukubhema, ukusebenzisa izidakamizwa, ukudla okungenayo impilo, izinga eliphezulu lokushisa esithweni sangasese, izifo zocansi ezithathelanayo, ukulimala esithweni sangasese, ukuvuleka kwemithambo yegazi esikhwameni sembewu.
“Izinkinga zenzalo ziyelapheka uma abathandanayo bekusukumele baya kongoti bezempilo okungaba udokotela owelapha izifo zabesifazane, i-gynaecologist, i-urologist noma i-urogynaecologist,” kusho uDkt Paterson.